हेर्नुहोस् २०७७ सालमा सिंह राशीको भाग्य कस्तो छ ? - Omkar Television
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा सिंह राशीको भाग्य कस्तो छ ?
चोटपटकको भए भने रहेकोछ । हात गोडामा चोटलाग्न सक्छ । ग्यासटिक रोगले सताउन सक्छ, अतस् स्वास्थ्यमा खर्च बढ्नेछ । खानपिनमा र यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन बढी आवस्यक छ ।
दर्शन र पूजा
प्रत्येक आईतबार सूर्य भगवानको जप र पाठ र उपासना गर्नाले ग्रहपीडा कम हुने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । प्रत्येक आईतबार वृद्ध जनलाई सहयोगगरी र आशीर्वाद लिनाले अधिक सफलता मिल्नेछ । वर र पिपालको वृक्षारोपण गर्नालेपनि ग्रहवाधा कम हुनेछ ।
पछिल्लाे - आमाहरुमा सर्मिपत दिन माता तिर्थ औशि
अघिल्लाे - लक डाउनको समयमा गोदावरि नगरपालिकाको भूमिका मेयर – गजेन्द्र महर्जन
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा वृश्चिक राशीको भाग्य कस्तो छ ?
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा मकर राशीको भाग्य कस्तो छ ?
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा कुम्भ राशीको भाग्य कस्तो छ ?
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा धनु राशीको भाग्य कस्तो छ ?
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा मीन राशीको भाग्य कस्तो छ ?
हेर्नुहोस् २०७७ सालमा तुला राशीको भाग्य कस्तो छ ?